महिलाहरूले पनि खान थाले सेक्सपावर बढाउने ‘फिमेल भायग्रा’ ! | Tungoon
इजिप्ट । महिलामा यौनेच्छा बढाउने औषधिको उत्पादन र वितरण गर्न अनुमति दिने पहिलो अरब राष्ट्र बनेको छ। बीबीसीकी स्याली नबिलले इजिप्टजस्तो रूढीवादी देशमा यसको बजार कस्तो छ भनेर बुझेकी छन्। पढौँ यो विवरण।
ढुकुढुकी बढ्यो- ‘मलाई निद्रा र रिंगटा लागेजस्तो भयो र मुटुको ढुकुढुकी बढ्यो’, ‘फिमेल भायग्रा’ भनिएको औषधि सेवन गरेपछि लेलाले यस्तो अनुभव गरिन्। हिलाका लागि बनाइएको सो औषधिको रासायनिक नाम फ्लिब्यान्सेरिन हो।
‘औषधिपसलेले मलाई प्रत्येक राति एउटा चक्की औषधि केही हप्ता खान भने। उनले त्यसबाट कुनै नराम्रो असर नहुने बताए,’ उनी भन्छिन्, ‘म र मेरा श्रीमान् के हुँदोरहेछ भनेर हेर्न चाहन्थ्यौँ। मैले एकचोटि प्रयास गरेँ, तर अब कहिल्यै पनि गर्दिनँ।’
औषधि उत्पादकले १० इजिप्टेली महिलामध्ये तीन जना कम यौनेच्छाबाट पीडित भएको बताएको छ। तर यो अनुमान मात्र हो। त्यहाँ यसबारे तथ्यांक संकलन गर्नु सजिलो छैन। सो कम्पनीका प्रतिनिधि अश्रफ अल माराघी भन्छन्, ‘यो उपचार यहाँ अत्यावश्यक छ। यो एउटा क्रान्ति नै हो।’ उनका अनुसार यौनेच्छा बढाउने औषधि सुरक्षित र प्रभावकारी छ।
‘तर उनीहरू किन्छौँ नै भन्छन्’, उनले भने, ‘एक दिनमा १० जनाजति मानिस सो औषधि किन्न आउँछन्। तीमध्ये अधिकांश पुरुष हुन्छन्।औषधि माग्न महिलाहरू लाज मान्छन्।’
सबै मानसिक हो- सदिकको पसलमा टाँगिएको विज्ञापनमा फ्लिब्यान्सेरिनलाई ‘गुलाबी चक्की’ भनिएको छ। पुरुषले सेवन गर्ने भायग्रालाई इजिप्टमा ‘नीलो चक्की’ भन्ने गरिन्छ। तर उत्पादकहरू सो औषधिलाई ‘फिमेल भायग्रा’ भन्नु उचित नहुने बताउँछन्। माराघी भन्छन्, ‘सञ्चारमाध्यमले त्यो नाम राखिदिएका हुन्, हामीले हैन।’
सेक्स थेरपिस्ट हेबा कट्ब पनि ‘फिमेल भायग्रा’ झुक्याउने शब्द हो भन्ठान्छिन्। उनले आफ्ना बिरामीहरूलाई त्यो औषधि दिने गरेकी छैनन्। ‘शारीरिक वा मानसिक समस्या भएका महिलामा यसले कहिल्यै काम गर्दैन’, उनी भन्छिन्, ‘महिलाका लागि यौन एउटा भावनात्मक प्रकिया हो। यो मनबाट सुरु हुन्छ। यदि पतिले दुर्व्यवहार गर्छन् भने महिलाले कहिल्यै स्वस्थ रूपमा यौनसम्बन्ध राख्न सक्दैनन्। औषधिले पनि काम गर्दैन।’
फ्लिब्यान्सेरिनको प्रभावकारिता एकदमै थोरै भएको र जोखिम लिनु नहुने उनको मान्यता छ। उनी चेतावनी दिन्छिन् – रक्तचाप घटाउनु यसको एकदम गम्भीर असर हो।
लेला आफूले सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिएका धेरै महिलालाई चिनेको बताउँछिन्। विवाहमा तनाव उत्पन्न भएपछि उनीहरूको यौनजीवन प्रभावित भएको उनको ठम्याइ छ। ‘यदि तपाईँ आफ्ना पतिलाई माया गर्नुहुन्छ भने उनी यौनिक रूपमा दुर्बल छन् भने तपाईँले उनलाई उपचारका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ। तर यदि दुर्व्यवहार गर्ने पति छ भने ऊ ओछ्यानमा सिपालु छ भने पनि तपाईँको रुचि घट्छ। पुरुषहरूले यो कुरा बुझ्दैनन्।’
Previousभेनेजुयला प्रकरणले नेकपामा विवाद, ओली नै बेखबर ?
Nextअब इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र फेसबुक मेसेन्जर एकीकृत पारिँदै
इन्डोनेसियामा गएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ५० जना पुेग्यो, दर्जनौँ मानिसहरू बेपत्ता